MAXAA CUSUB | GURIGA HAWEENKA | Page 88
Home » MAXAA CUSUB (page 88)
VIDEO LOS ANGELES:Dumar dagaal feer iskala daalay oo gawaari isu adeegsaday
Admin December 4, 2016	MAXAA CUSUB
Labo dumar oo ku dagaalamay parking baabuur ayaa markii ay feer iskala daaleen waxa ay isu adeegsadeen gawaaridoodii cus-cusbaa, waxaana ay isaga dhegeen baaba.
Riix Halkaan ee Daawo Muuqaalka Video-ga Dagaalka
Admin December 4, 2016	MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay’adda Save the Children, todobadii ilbiriqsiba hal gabar oo da’deeda 15 jir ka yartahay ayaa loo guuriyaa.
Hay’adda Save the Children ayaa sheegeysa in gabdhaha yaraanta lagu guursado ay soo jiidaneyso dhibaato soo gaarto qeyb walba oo nolasheeda ka mid ah.
Dagaalka, saboolnimada, iyo dhibaatooyinka bani’aadanimo ayaa loo arkaa in saameynta ugu weyn yihiin, iyaga oo sababa in gabdhaha lagu guursado ayaga oo aan qaan gaarin.
“Caruurta oo la guursado iyaga oo aan gaarin wakhtigaasi, waxay gabdhaha ka qaadaysaa xuquuqda aasaasiga ah sida waxbarashada, horumarka iyo caruurnimadaba, “waxaa sidaa sheegay aggaasimaha guud ee hay’adda Save the Children, Helle Thorning-Schmidt.
“Gabdhaha yaraanta lagu guursado waxa marar badan dhacda in aysan waxbarasha helin, waxa ayna u badan tahay in ay la kulmaan rabshadaha qoyska ka dhex dhca, xadgudub, iyo kufsi.
Warbixinta oo cinwaan looga dhigay ‘Dalalka ugu dhibka badan oo gabar ay ku noolaato’ ayaa waxa lagu eegay dhinacyada waxbarashada, gabdhaha aan gaarin guurka oo la guursado, gabdhaha da’ada yar ee uurka qaada, dhimashada foosha iyo tirada haweenka ee baarlamaanka ku jira.
Image captionWarbixinta ayaa sheegeysa in gabdhaha ku jira xeryaha qaxootiga iay halis ugu jiraan in loo guuriyo ayaga oo caruura ah
Hay’adda ayaa tusaale u soo qaadatay gabar 13 jir ah oo u dhalatay dalka Suuriya kuna nool dalka Lubnaan, ayna u bixiyeen magaca Saxar, inkasta oo aanu aheyn magceeda saxda ahaa, oo guursatay nin 20 jir ah.
“Maalintii arooskeyga, waxaan istusinayay in ay noqneyso maalin weyn laakiin ma aheyn.
Waxa ay aheyd maalin dhib badan. Waxa ay aheyd mid murago badneyd,” Save the Children ayaa hadalkaa ka soo xigatay Saxar.
“Waxaan dareemayaa inay farxad tahay in aan cunug dhalay. Laakiin waxaan ahay cunug, cunug kale korinaya. ”
Warbxinta ayaa sheegeysa gabdhaha in sidoo kale ay dhibaato soo gaarto xilliga ay dhacayaan dhibaatooyinka bani’aadanimada sida caabuqa Ebola ee dalka Sierra Leone, ka dillaacay, kaas oo sababay markii iskuulada la xiray in qiyaastii gabdho gaaraya 14,000 ay uur qaadeen.
Hay’adda caruurta ee Qaramada Midoobay, Unicef, ayaa ku qiyaastay tirada gabdhaha la guursado iyaga oo caruur ah in ay gaarayso 700 oo milyan.
74 milyan oo doolar ayuu ku bixinayaa guurka gabadhiisa Kadib Markii aay jec….
Admin December 4, 2016	Lamaanaha, MAXAA CUSUB
Image copyrightQOYSKA JANARDHANA REDDY
Image captionArooska waxaa ilaallo ka ahaa 300 Booliis ah
Haweeney Mareynkanka u dhalatay oo lagu “kufsaday” dalka Hindiya
Booliska dalka Hindiya ayaa baaraya sheegashada haweeney Amerikan ah oo tilmaamtay in Delhi lagu kufsaday.
Haweeneyda ayaa sheegtay in qeybta sare ee hoteelka lagu magacaabo Delhi, lagu kufsaday, sanadkan horraantiisa.
Waxay intaa raacisay inuu afar jeer kufsaday ninkaasi intey suuxsaneyd, ka dibna uu ka tagay.
Waa kiiskii ugu dambeeyay oo ka mid ah xad gudub galmo oo lagula kacay dumar dalxiis u tagay dalka Hindiya.
Ayadoo sharaxeysay sababta dacwadeeda ay u soo daahday, waxay sheegtay in ay murugo iyo niyad-jab qaaday markii dalkeeda ay ku noqotay.
Qoyskeeda xittaa lameysan wadaagin dhibaatada ku dhacday haweeneysaasi.
Haweeney si lama filaan uga soo baxday doorasho ka dhacday Muqdisho+(magaca)
Doorashada Aqalka hoose ee Beelaha Banaadiriga oo maanta ay ku tartamayeen Labo Haween ah ayaa waxaa ku guuleysatay Fahmi Axmed Nuur oo heshay 51 cod.
Amaanka magaalada Muqdisho gaar ahaan goobta ay ka dhaceyso doorashadaa ayaa si aad ah loo adkeeyay waxaana la xiray wadooyinka gala iyo kuwaka baxa xarunta Gaadiidka oo doorashada ay ka socoto.
Doorashada beelaha Banaadiriga ayaa wali ka socota Magaalada Muqdisho, waxaana maanta lagu wadaa in la doorto kuraas kale.
Meelo badan oo ka tirsan dalka waxaa si habsami leh uga socdo Doorashada Aqalka hoose ee Baarlamaanka soo socda.
DHAGAYSO:Wareysi naxdin Badan Aabaha Labadiisa Wiil Lagu Dilay Sweden oo Sheegay Arrin Soomaalida Ka Yaabisay
Admin December 3, 2016	MAXAA CUSUB
Laba wiil oo Soomaali ah ayaa xalay toogasho lagu dilay magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden. Dadkan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen rasaas ay rideen dad wejiyada soo xidhay. Wiilashan oo walaalo ahaa ayaa lagu dhex toogtey maqaayad ay wax ka cunayeen sida uu aabahood u xaqiijiyey VOA.
Faysal iyo Zakariye Cartan ayaa waxaa ay ku dhasheen dalka Sucuudiga iyaga oo da’yarna la keenay dalak Sweden. Sida uu aabaha wiilasha sheegayna waxaa ay udhinteen dakano mid ka mid ah loo haystey dil la xariiro wiilal Soomaali iyo ajaanib isugu jirta oo isla dalkaas lagu diley, qaarna la xirxirey sanadki hore.
Jaamac Buulle Jaamac ayaa dilkan ka waraystay aabe Cartan Cabdi Jimcaale.
Riix Halkaan ee DHAGAYSO Wareysiga
DAAWO: Laba Wiil oo Soomaali ah oo Toogasho lagu dilay dalka Sweden iyo Sida Naxdinta badan ee wax u dhaceen
Admin December 3, 2016	MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Laba Wiil oo Walaalo ah ayaa xalay lagu toogasho lagu dilay dalka Sweden, kadib markii weerar ay ku qaadeen koox dabley ah oo bistoolado ku hubeysan wejiyadana soo qarsaday.
Sida uu sheegay Booliska wuxuu falku ka dhacay xaafadda Rinkeby ee magaalada Stockholm, iyadoo labada wiil ee
walaalaha ah ay ku dhinteen markii isbitaalka loola cararay, waxaana sidoo kale rasaasta ku dhaawacmay ruux kale oo goobta ku sugnaa.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dilka labada wiil ee Soomaalida ah, wararkii horeeyay ayaa lagu sheegay inay dilka geysteen saddex nin oo gaari ku baxsaday. Booliska magaalada ayaa wada baaritaan dheeraad ah.
Shilka Xaafadda Rinkeby ka dhacay oo Soomaalida muddooyinkii dambe ku soo bateen, waxaa ka taagan murugo weyn, waxaana buux dhaafiyay ciidamo boolis ah.
Topic: Cabidda Shaaha badan ma laga qaadaa dhiigyari !! ?
Admin December 2, 2016	Heath, MAXAA CUSUB
Soomaali badan ayaa aaminsan in shaaha laga qaado dhiig yari, qaar kalane waxay aaminsan tahay in shaaha uu dhiigga kordhiyo, sidaas darteed, waxaan qoraalkaan ugu kala gar qaadaynaa labadaas koox.
Shaaha, koffeyga iyo cabitaanka shukulaatada (kookaha) intaba waxaa ku jiro maaddo loo yaqaano “Polyphenols”, maadadaan waxay hoos u dhigtaa macdanta birta ee laga helo cunnada.
Sidaas awgeed waa in aadan shaaha, kaffeyga iyo cabitaanka shukulaatada aadan cabin xilliga cunnada, haddii aad cabayso waa in ugu yaraan ay hal saacad ka soo wareegataa.
Haddii ay caado kuu tahay in shaaha aad cunnad ku cabtid ama isla markibia aad ka daba cabtid waxaa hoos u dhaca maadada birta ee dhiigga laga sameeyo maadaama jirka uusan ka faa’idaysan karin birta ku jirta cunnada aad cuntay, taasina waxay keentaa dhiigyarida loo yaqaano “Iron Deficiency Anemia” oo laga wado dhiigyarida ka dhalatay bir la’aanta.
Caruurta yaryar iyo hooyooyinka uurka leh ayaa ugu baahi badan macdanta birta sidaas awgeed waa inay ka fogaadaan cabista shaaha xilliga cunnada.
Laakiin haddii aadan cunno ku cabaynin, shaaha kaligiis oo la cabo ma keeno dhiigyari, sida aan horay uga soo hadalnayba wuxuu leeyahay faa’iidooyin caafimaad oo aad ka daalcan kartid halkaan:
VIDEO:Hooyo Soomaaliyeed oo noqotay askariyadda ugu darajada sareysa Soomaaliya: DAAWO
Admin December 2, 2016	MAXAA CUSUB
Faadumo Xasan Maxamed oo mudo aad u fog ka tirsaneyd ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa noqotay askariyadda ugu darajada sareysa haweenka Soomaaliyeed.
Haweeneydaan ayaa darajadeeda ah Colonel, waxayna ku mudeysatay kartida ay u leedahay howlaha ciidamada booliska iyo shaqadeeda.
Faadumo Xasan ayaa sheegtay in shaqada booliska ay kusoo biirtay 78-kii xiligaasi oo la siiyay xiddigle, waxayna soo martay shaqooyin kala duwan oo dhinaca howlaha booliska.
Xiligaan la joogo Faadumo ayaa ah qofka dumarka ah ee ugu sareeya booliska Soomaaliyeed, iyadoo ay geeriyooday haweeney kale oo darajada Colonel haysatay. Waxaa kaloo jira dumar kale oo iyagana loo dalacsiiyay Captain, kuwaasoo kala ah Idil Abdullahi Hassan and Rahma Salad Mohamed.
Daawo: Fadumo Qaasim “Kama hadhin Madaxwaynaha Soomaaliya, Dagaalku Wuu socdaa” iyo Waxii ay soo Aragtay
Admin December 2, 2016	MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Faadumo Qaasim Dayib oo ah Gabadh u taagan Xilka Madaxwaynaha Soomaaliya ayaa sheegtay inayna ka Hadhin Doorashada Soomaaliya “Dagaalku wuu socdaa, Kama hadhin Doorashada, kama Aamusi doono Xaalada ka jirta Soomaaliya Runta ayaan sheegi doonaa, Waxaa Afkayga kasoo baxay Cabaad aan ka Cabaaday Fool-xumada dalka Ka Jirta” Ayay tidhi.
Faadumo ayaa marka hore Muuqaalkeeda ku Bilaabaysa Luuqada English-ka Iyadoona intaasi kadib Ku hadlaysa Luuqada Af-Soomaaliga.
Waxay sheegtay inay Soomaaliya kusoo Aragtay Saxafiyiin Calool u shaqaystayaal ah, Sidoo kalana waxay sheegtay inay adag tahay in lala Tar-tamo Madaxwaynaha Soomaaliya, Isagoo Adeegsanaya Awoodii Dawlada. Taasina ay ka dhigan tahay Qof labada Gacmood laga xidhay oo la yidhi dagaal gal, Waxayna Xustay inay laba Xafiis ka furan doonto Nairobi iyo Muqdisho.